८० जनासँग सम्बन्ध राख्ने डाक्टरकी श्रीमती ! – Satyapati
८० जनासँग सम्बन्ध राख्ने डाक्टरकी श्रीमती !
एजेन्सी । एक जना डाक्टरकी विधवा महिलाले श्रीमानको मृत्युपश्चात् ८० जना विवाहित पुरुषहरुसँग ‘लसपस’ रहेको खुलासा गरेकी छिन् । ४३ वर्षकी लुइस भान डेर भेल्डेले दर्जनौँ व्यक्तिहरुसँग सम्बन्ध राखेको खुलासा गरेकी हुन् । उनका अनुसार भ्यालेन्टाइन डेपछिको हप्ता प्रायः सम्बन्ध गुमेका मानिसका लागि नयाँ सम्बन्ध खोज्ने समय भएकाले उनी व्यस्त हुन्छन् ।
उनले आफूलाई सेक्सथेरापिष्ट बताउँदै आफ्नो र ती विवाहित पुरुषबीचको चिङ्गिग सम्बन्ध थाहा पाए पनि उनीहरुका श्रीमतीहरुले सेक्स कै कारण विरोध गर्न नसकेको बताइन् । मानिसहरुले आफूलाई धेरै सोच्न नहुने र सेक्सचाहिँ धेरै गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । जीवन एकदमै छोटो रहेको भन्दै उनले सेक्सलाई एक जनासँग मात्रै सीमित गर्न नहुने सुझाव दिइन् । उनले आफ्नो विवाहको पछिल्लो वर्ष पहिलोपटक श्रीमानलाई चिट गरेकी थिइन् ।
जसको सन् २००४ मार्चमा ३४ वर्षकै उमेरमा मृत्यु भएको थियो, उनी नै भेल्डेको अन्तिम श्रीमान थिए । श्रीमानको मृत्युले जीवनपर्यन्त महत्वपूर्ण समयलाई छोपिहाल्ने पाठ सिकाएको उनको दाबी छ । ५० औँ वर्षसम्म एउटैसँगको शारीरिक सम्बन्ध एकदमै दिक्क लाग्दो हुने उनी बताउँछिन् । आफूले सम्बन्ध राखेकामध्ये सबै पुरुषहरुले श्रीमतीमाथि चिट गरेको उनले दावी गरिन् । उनी बेलायतको नर्थ योर्कशायरस्थित हारोटेजमा बस्छिन् ।